Masinina fanamarihana laser amin'ny laser, milina fanamarihana laser - Boln
Ny teknolojia fanamarihana dia mihatra amin'ny indostrian'ny faritra, afa-tsy ny fanamarihana isa isa, ny masontsivana izay afaka mitantana mpamatsy ihany koa ary mahatratra ny fahaizan'ny vokatra ary avy eo ampiasaina hiambenana amin'ny vokatra sandoka sy ambany. Ny fitantanana ny mpamatsy dia miseho indrindra amin'ny fanamarihana ny laharan-dahatsoratra, ny anarana ary ny logo amin'ny faritra mandeha amin'ny fiara, ary avy eo mifandraika amin'ny tahiry, ny fanaraha-maso ny habetsahan'ny vokatra sy ny karazany, amin'ny farany fanatanterahana ny asan'ny fangatahana sy fanaraha-maso ny fikorianan'ny vokatra ary ny fivarotana ifanarahan'ny mpivarotra.
Ny masinina fanamarihantsika dia afaka manamarika ny famaritana, ny laharana andiany ary ny isa eo ambonin'ny vokatra, ampiasaina amin'ny singa elektronika, mpanova, mpampifandray elektronika, board circuit, plastika, vy, batterie, plastika mazava, fitendry, motera kely ary switch. Betsaka ny singa sy tabilao mihodina no mila asiana marika sy kaody amin'ny indostrian'ny fitaovana elektronika, amin'ny ankapobeny manamarika ny isa ampaham-potoana, ny fotoana famokarana ary ny daty fananganana trano fivarotana. Ny ankamaroan'ny mpanamboatra dia mampiasa pirinty na fanoratana amin'ny lamba landy, ary ny sasany kosa mampiasa milina fanamarihana laser.
Ny teknolojia laser dia napetraka amin'ny indostrian'ny fonosana. Ny fitaovana laser dia afaka manamarika ny daty famokarana, ny daty famaranana, ny isa isa, ny logo, ny kaody bara amin'ny fonosana vokatra misy ranoka sy matevina. Mandritra izany fotoana izany, azo ampiharina amin'ny fitaovana fonosana maro izy io, toy ny boaty baoritra, tavoahangy plastika PET, tavoahangy fitaratra, sarimihetsika mitambatra ary boaty firapotsy. Ny fitaovana laser dia azo ampiasaina amin'ny paraky, tsy ho an'ny famantarana ny mombamomba ny vokatra sigara (ohatra sigara Carton na sigara boaty avy amin'ny ozinina paraky), fa koa hanamarihana ny vahaolana toy ny anti-counterfeiting, fitantanana varotra ary ny fanarahana logistika.
Ny orinasanay dia manaraka ny R&D tsy miankina ary mifantoka amin'ny zavatra niainan'ny mpampiasa, fanavaozana mihombo, mamita irery ny volavola rehetra. Mba hahazoana antoka fa azo fehezina ny fizotran-javatra rehetra ary manafoana ireo toe-javatra tsy ampoizina mandritra ny fanatanterahana tetik'asa, dia raisinay ny paikady novolavolaina fa tsy ny famolavolana programa ivelany sy mahaleo tena, manome vahaolana sy serivisy hijanona ho an'ny mpampiasa ho an'ireo mpampiasa.